AirPods n'etiti ihe 25 kachasị mma nke 2016 dịka akwụkwọ akụkọ TIME | Esi m mac
AirPods n'etiti ihe 25 kachasị mma nke 2016 dị ka magazin TIME
Otu afọ ọzọ, lọ na-asọpụrụ TIME magazin nwere Apple ngwaahịa n'etiti 25 kasị mma mepụtara nke 2016. Naanị mmadụ ole na ole ahọpụtara nwere ihe ùgwù nke esonye na ndepụta a, nke na-akwado ọ bụghị naanị ndị ikike teknụzụ, ma ọ bụrụ na ọ bụghịkwa ihe ọhụrụ ha nwere na mfe na ya owuwu. Ma gịnị kpatara ya, ngwaahịa na-emepụta ihe ọhụrụ nke ọtụtụ ndị na-emepụta ụdị ndị ọzọ na-elegara ya anya iji wuo nsụgharị nke ha.
N'ime ndepụta anyị nwere ike ịchọta site na bọlb ọkụ nke na-elegharị anya, okpu igwe na-ehicha ma ọ bụ poteto na-atọ ụtọ nke na-azọpụta ndụ na mba ndị na-emepe emepe.
Otu n'ime ihe ịtụnanya gbasara ntinye a bụ enweghị ihe dị na ụlọ ahịa. Nke ahụ bụ ịsị, ruo ugbu a ọ bụghị ire ere ma ọ bụ naanị mmadụ ole na ole nwere ikike nwalere ha na ngosi ahụ mgbe mbido Septemba. Ya mere, ọ bụ edemede nke ọha na eze na-enweghị ike iji ya kpọrọ ihe, mana n'agbanyeghị nke ahụ, ọ na-emepụta atụmanya dị otú a na magazin a ma ama kpebiri iji tinye ya na ndepụta ya a ma ama, nke a na-ebipụta kwa afọ kemgbe 2012.
Ma ọ bụ na ekweisi ndị a abụghị naanị na-enye ọrụ ikuku, na-eme ka ha nwekwuo ọrụ na onwe ha. Magazin ahụ ji ụkpụrụ atọ dị mkpa kpọrọ oke nke ga-agbanwe otu esi eji ekweisi eme ihe.
Nke mbu, ka anyi cheta na ekweisi di na a igbe nke n'aka nke ya dika chaja. Mgbe ewepụrụ ya na igbe, ha na-ejikọ anyị iPhone, iPad ma ọ bụ iPod na-akpaghị aka na ngwaọrụ ahụ, na-enweghị onye ọrụ iji rụọ ọrụ ọ bụla, ekele maka Mgbawa a maara dị ka "W1 mgbawa".
Nke abuo, ihe omuma anyi di egwu Siri naanị site na ịpị ekweisi ndị a ugboro abụọ.
Nke atọ, ọ na - agụnye teknụzụ dịka nke etinyere na iPhone, dị ka Nkagbu Noise mgbe ọ chọpụtara na anyị chọrọ ịgwa mmadụ okwu.
Ikekwe Apple enwetaghachila "ihe omimi nke a" nke anyị na-emebu, ebe anyị maara ngwaahịa ahụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kpamkpam, mana ruo mgbe anyị nwere ya n'aka anyị, ọ nwere ike ịnwe ọrụ zoro ezo na ọhụụ ọhụụ. Nke a mepụtara nchegbu a anyị na-atụ anya ga-edozi tupu ọ rute na ekeresimesi a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » AirPods n'etiti ihe 25 kachasị mma nke 2016 dị ka magazin TIME
Alvaro Frutos dijo
Njikọ aka zoro aka agaghị abụ ihe ọjọọ ...
Zaghachi Álvaro Frutos
Right zuru oke nke ọma Alvaro, e zubere ya mana ọ mere m. I nweela ya. Daalụ maka ikwu.
Ngwa ngwa Mac kacha mma ka ị tinye n’akwụkwọ ozi gị nye ndị Magi
Apple Watch esonye na ndepụta nke ngwaọrụ eji emegharị emegharị